Oktobra: Nanomboka ny fanamby ary tsy tokony hadinonao izany | Famoronana an-tserasera
Ivan Retamas | | Inspiration
Nandritra ny taona vitsivitsy dia lasa ny Oktobra volana iray mifandraika amin'ny mpanao sary avy amin'ny vazan-tany rehetra, na ny amateurs na ny matihanina dia samy mitondra ny inks mandritra ity volana ity, ny antony: Ny fanamby Inktober, hevitra novolavolain'ny mpanao sary Jake Parker tamin'ny 2009 ary azon'ny rehetra idirana.
Jake Parker dia nametraka ny tenany, ho fanamby manokana, manaova sary ranomainty mandritra ny andro tsirairay amin'ny volana Oktobra miaraka amin'ny fikasana hamorona fahazarana sy hiady amin'ny fanemorana.
Namorona ny tenifototra #inktober izy hametahana ireo sary ary nanjary nalaza io zavatra io, ny mpanao sary avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nanatevin-daharana fanamby iray isan-taona mahazo mpanaraka.
Lahatsoratra zarain'i moon_mxtr (@moon_mxtr) tamin'ny Oct 6, 2016 ao amin'ny 6: 25am PDT
1 Maninona ianao no tokony hisoratra anarana amin'ny fanamby Inktober?
2 Handroba ny stationery!
Maninona ianao no tokony hisoratra anarana amin'ny fanamby Inktober?
Satria ny tenifototra # inktober2016 dia hisy akony betsaka amin'ity volana ity ary hiantoka anao a fahitana bebe kokoa sy fikorianan'ny fitsidihana ao amin'ny tambajotra sosialinaoAnkoatr'izay, amin'ny fanerena ny tenanao hanomana sy hampakatra sary isan'andro, dia hamorona fahazarana miasa ianao ary hanatsara ny teknikao amin'ny ranomainty. Ao anatin'ny vanim-potoana niomerika isika izay ahatak'ireo mpanao sariitatra maro ny takelaka misy sary isan'andro, ary ity dia mety ho fotoana mety handotoana ny tànany amin'ny fomba nentim-paharazana.
Tamin'ity taona ity i Jake Parker tenany dia nampakatra lisitra tao amin'ny tranonkalany nanendrena azy lohahevitra ho an'ny andro tsirairay amin'ny volana. Raha misy olona miraikitra eo alohan'ilay taratasy banga dia azony sintonina izany fa mandeha tsy miteny izy fa tsy mila mifikitra amin'ireo tolo-kevitra ireo mihitsy ianao.
Handroba ny stationery!
Ekeo izany, ny fivarotana fitaovam-pitaterana dia toerana mahafinaritra ary tiantsika rehetra izy ireo, eny fa na dia ireo tsy manintona aza, angamba satria mampatsiahy antsika ny fahazazantsika. Ny Inktober dia fialan-tsiny tonga lafatra hidirana amin'izy ireo handany vola amin'ny fako izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy hampiasaintsika isika.
Manoro hevitra anao manokana aho fa hahazo izany sary fohy napetraka azonao alaina hatraiza hatraiza31 andro izao ary na dia fotoana mety aza hanaovana fanazaran-tena amin'ny penina, borosy ary na inona na inona fitaovana azonao eritreretina, dia afaka mahita ny tenanao manohitra ny tady ianao mamita sary manohitra ny famataran'ora amin'ny bara, any am-piasana na rehefa manandrana mamonjy ilay vahindanitra.
Ity no fitaovam-piadiana ampiasaiko ary misy izy:
Blaogy dinA5 karazana Moleskine vita amin'ny taratasy mavesatra ho fanohanana ny fanasana ink.
Pensilihazo mekanika sy fingotra ho an'ny sketches (na dia indraindray aza dia tsara ny milalao azy ary manao azy mivantana amin'ny ranomainty).
Marika Sakura Pigma FB miaraka amin'ny tendron'ny borosy izay mamela ahy hanova ny lalan-dra.
Un PigmaMicron 03, koa avy amin'ny marika Sakura, ho an'ny tsipika tsara.
Un Sakura Koi miaraka amin'ny tendrony borosy sy loko volondavenona mainty hanoratanao ny tsipika ambany ary hanome halaliny bebe kokoa.
Un Aquastroke, izay karazana borosy misy tanky hamenoana ny ranomainty miloko izay tiako ampiana amin'ny sary na mamorona ny aloka.
Raha ny momba ny inks, ny tsara indrindra hatreto dia ny J HerbinIo no tranainy indrindra (efa hatramin'ny 1670 no nanaovan'izy ireo azy) saingy tsy mora ny mahita azy. Ilay ampiasako matetika dia Windsor sy NewtonTsara be izy io ary manana loko maro karazana izy ireo. (Ankoatr'izay, ny inkwells sy ny boaty misy azy dia misy fampisehoana mahafinaritra izay tianao hanangonana azy ireo).
Vonona hiady ianao amin'izany.
Nanomboka andro vitsivitsy lasa izay fa tsy olana ny ho tototry ny saina raha tsy tonga amin'ny tanjon'ny 31 andro ianao, amin'ny taona ho avy dia tsy ho voafitaka ianao (fantatro ny maro izay manomboka miasa amin'izy ireo iray volana talohan'izay ).
Angamba ny tambajotra sosialy izay misy ny tabataba indrindra amin'ny lohahevitra Inktober dia Instagram. Raha mbola tsy namorona piraofilina teo ianao dia mety ho tonga ny fotoana hanaovana izany. Na dia tsy mikasa ny hampakatra sary aza ianao dia ilaina ny manaraka ny tenifototra hanome aingam-panahy anao na hahita talenta vaovao, misy biby tena izy any.
Fotoana izao mba hisoratanao anarana ho an'ny inktober, tsidiho ny fivarotana fitaovam-pitaterana ary manomboka mampakatra sary toy ny tsy voaisy sarona. (Ny iray izay mbola tsy natomboka noho ny antony fandaharana dia milaza aminao).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Inktober: Nanomboka ny fanamby ary tsy tokony holavinao izany